Ku Beddel Waxqabadyada Wicitaanka 'Reps' Iibsigaaga Wadahadal Toos ah | Martech Zone
Ku Beddel Waxqabadyada Wicitaanka 'Reps' Iibintaada Wadahadal Toos ah
Talaado, September 22, 2015 Jenn Lisak Golding
Ku Xidh Gacan Qabashada Telefoon ka soo horjeedka cagaaran
Muddo tobanaan sano ah, wicitaan qabow ayaa caqabad ku ahaa inta badan iibiyaasha jiritaankooda, halkaas oo ay saacado badan ku qaataan sidii ay qof ugu heli lahaayeen taleefanka oo aan wax badan dib u soo laaban. Waa karti la'aan, adag oo inta badan aan la saadaalin karin. Si kastaba ha noqotee, maaddaama ay jirto xiriir toos ah oo u dhexeeya mugga iibka dibadda iyo heerka iibka ee kooxdu xiran tahay, wicitaanka qabow waa shar shar u ah bixitaanka maanta ama gudaha kooxaha iibka.
Dabcan, dadka wax iibiya marwalba kuma kalsoonaan karaan shabakada ay horeyba u haysteen inay kaxeeyaan iibintaas, waxaana loo baahan yahay farsamo ay ku galaan suuqyada aan la furin ama barkadaha rajada laga qabo. Laakiin, sida shaqo kasta, waxaa jira hawlo ay wakiilashadaada iibintu ay tahay inay waqti ku qaataan iyo kuwo kale oo aan si fudud u ahayn waqtigooda.
Qaybaha Wicitaanka Qabow
In kasta oo wicitaan qabow ay shar u tahay geedi socodka iibka, macnaheedu maahan in iibkaaga iibku ay tahay inuu wax ka qabto dhinac kasta oo ka mid ah. Waxaa jira saddex qaybood oo wicitaan qabow ah:
Liiska Abuurista: Tan waxaa ka mid ah aruurinta, ansaxinta, iyo nadiifinta liistada rajada ee wakiiladaada iibka dibedda ah si ay u soo wacaan.
Wicitaanka: Waxqabadka dhabta ah ee wicitaanka, oo ay kujirto la tacaalida dardar-gelinta taleefanka, la hadalka irid-ilaaliyeyaasha iyo hagidda nidaamyada otomaatiga ah.
Soo afjarid: Qaybtani waxay diiradda saareysaa oo keliya ka faa'iideysiga wada hadal toos ah iyada oo la rajeynayo in lagu kiciyo iibsi.
Saddexdaan qaybood, waxaa iska cad waxqabadka ugu muhiimsan ee bixitaanka dibedda ama gudaha iibiyaha waa inuu noqdaa xidhitaanka.
Ka fogaanshaha wadahadalka ee ku saabsan liistada rajada, garaaciddu waa mid ka mid ah waxqabadyada ugu badan ee aan waxtarka u lahayn ee iibka. Ka fikir inta jeer ee ay ku bixinayaan wicitaanka iyo dib u soo celinta nambarada markay diiradda saari karaan waxa ugu wanaagsan ee ay qabtaan: iibinta alaabtaada ama adeeggaaga.
Xaqiiqdii, waxay qaadataa 21 wicitaan, celcelis ahaan, si loo abuuro hal wadahadal toos ah, iyo iibinta iibka ayaa kaliya celcelis ahaan sameeya 47 wicitaan maalintii.
Waxsoosaar aad u tiro badan ayaa lumay iyada oo wakiilladaada iibku ay mas'uul ka yihiin garaacista iyo marin haynta geedo taleefan oo aan dhammaad lahayn. Ka waran haddii macaamiisha wax iibintaadu aysan ahayn inay garaacaan gabi ahaanba laakiin wali lagu siinayo wadahadal toos ah
Waa maxay Dialing Team?
Maaha wax qarsoodi ah in ganacsiyado badani ay bixiyaan hawlo kala duwan oo ka socda meheraddooda, haddaba waa maxay sababta ay garaacistu u kala duwanaanayso?
Garaacida kooxda waxay siisaa kooxaha iibka wakiilo wicitaan kuwaas oo ku xiraya iibkaaga iibka kuwa go'aanka gaara waqtiga dhabta ah, iyadoon loo baahnayn in la garaaco. Waa ka duwan goobta ballanta taas oo ah in wakiiladaasi aysan mas'uul ka ahayn barashada wax soo saarkaaga ama adeeggaaga; iyagu si fudud ayey mas'uul uga yihiin inay la hadlaan ilaaliyeyaasha albaabka, hagidda taleefannada taleefannada, iwm si ay si toos ah ugula xiriiri karaan wakiilladaada go'aan-qaadaha, iyagoo siinaya wada hadal toos ah rajada.
Kooxda garaacistu waa mid casri ah, dhakhso badan oo fudud, iyadoo sidoo kale la siinayo faa'iidooyin la taaban karo. Haddii wakiilka garaacistu uusan la xiriiri karin go'aanka gaaraha, waxay u gudbayaan mid kale intaad iibineysid wakiilka kaliya ayaa xoqeysa marka wadahadalka tooska ah uu diyaar yahay. Waxaa jira natiijooyin cad, oo leh aragti ku saabsan inta wicitaano la sameeyay, inta wadahadal la yeeshay iyo heerka isku xirka.
Ku beddel waxqabadyada wicitaanka wakiilladaada wadahadallo toos ah adoo maalgelinaya a adeegga garaacida kooxda. MonsterConnect, kafaala-qaadeheena ugu cusub, wuxuu bixiyaa wicitaano 150-200 iyo 8-12 wadahadal toos ah oo lala yeesho go'aan qaadayaasha saacadiiba, isagoo bixiya 40 jeer natiijooyin wanaagsan iyo heshiisyo badan oo xiran.
Codso qiimeyn bilaash ah ama demo adeegga wicitaanka kooxda MonsterConnect maanta:
Qiimeynta Qiimeynta Bilaashka ah Codso Demo a
Warbixinnada Akhlaaqda ee Falanqaynta Google: Waxay Ka Faa'iido Badan Tahay Inaad Ogaato!